सरदारहरु: पावर को क्रिस्टल | Coinfalls क्यासिनो
सरदारहरु: पावर को क्रिस्टल
यो NetEnt स्लट सरदारहरु: पावर को क्रिस्टल यस कार्टून-थिम्ड स्लट को सबै भन्दा विपरीत गम्भीर व्यापार को brags. सरदारहरु: पावर को क्रिस्टल सँगै ल्याउँछ3आपस झगडा सरदारहरु शक्ति को क्रिस्टल भेला गर्न. त्यसैले, तिनीहरूले कुनै पत्थर unturned छोडेर तपाईं र आफूलाई लागि धन जित्न सबै आफ्नो शक्ति दोहन. यो3सरदारहरु भएको असभ्य छन्, यो Priestess, र यो सामुराई. तिनीहरू मुक्त spins र पुन: spins जस्ता सुविधाहरू बाहिर पिचिंग लागि जिम्मेवार हुन्छन्, स्ट्याक wilds आदि. तिमी ठूलो कमाउन सुनिश्चित र शुद्ध मजा समय छ.
देखि 1996, NetEnt गेमिंग प्रविधि व्यापार मा गरिएको छ. कम्पनी स्वीडेन जस्तै विश्वभरिका विभिन्न देशहरूमा कार्यालय, माल्टा, युक्रेन, जिब्राल्टर, संयुक्त राज्य अमेरिका, र पोल्याण्ड. तिनीहरू माथि को एक पूल हो 700 कर्मचारीहरु माथि सेवा 100 संसारको अनलाइन क्यासिनो संचालक को. त्यहाँ वरिपरि छन् 200 मिति र सूची सम्म आफ्नो क्रेडिट गर्न रोमाञ्चकारी खेल कहिल्यै विस्तार गरिएको छ.
सरदारहरु: पावर को क्रिस्टल तपाईं संग एक गाढा पृष्ठभूमि प्रस्तुत5कुशलता यो भन्दा बढ रील. यो स्लट तत्काल अप आफ्नो लड आत्मा संग 30 हात मा paylines. यो सट्टेबाजी दायरा £ 0.15 को एक न्यूनतम देखि सुरु £ 150 को अधिकतम. यो गेमप्ले एक RTP प्रदान गर्दछ 96.89% खेलाडी गर्न. यो स्लट खेल सिद्ध युद्धमा दृश्य सिर्जना गर्दछ र खेलाडी लागि एक शानदार वातावरण सिर्जना. जंगली प्रतीक ट्रम्प कार्ड छ र यो तपाईं को लागि संयोजन विजेता बनाउन कुनै पनि अन्य प्रतीकको रूपमा कार्य. त्यहाँ छन्2wilds को प्रकार यो खेल मा वर्तमान, namely the standard wilds and the overlay wilds.
यो3सरदारहरु पनि ध्रुवीय प्रतीक हो. र यो entails को बाउनटिफूल भएको असभ्य, यो Priestess र स्लट प्रस्तावित सामुराई मुक्त spins.
युद्धमा तपाईं गेमप्ले समयमा गर्न accustomed गरिने सबै सुविधाहरू निर्णय. त्यसपछि, त्यहाँ केही खेलको अन्य अनियमित सुविधाहरू तपाईं आनंद बाँधिएका छन् जो. यी अन्तिम सम्भावना सुविधा छन्, युद्ध सुविधा, र स्ट्याक्ड प्रतीक, सबै तपाईंलाई धेरै रोमाञ्चक पुरस्कार ल्याउन.
खेल मा अतिरिक्त सुविधाहरू संख्या पक्कै यो स्लट बजार मा उपलब्ध स्लट को होस्ट बाहिर खडा बनाउँछ. तपाईं यस्तो सुविधाहरु को एक ढेर showering एक breakneck गति रोमाञ्चकारी गेमप्ले आनन्द भने, त्यसपछि सरदारहरु: पावर को क्रिस्टल तपाईं को लागि सही स्लट छ.